दमले मुटु, मिर्गौला र दिमागको रोग निम्त्याउँछ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता दमले मुटु, मिर्गौला र दिमागको रोग निम्त्याउँछ
on: June 29, 2018 अन्तरवार्ता
दमले मुटु, मिर्गौला र दिमागको रोग निम्त्याउँछ
नेपालमा विकास निर्माणका कारण बाटो खन्ने–भत्काउने क्रम चलिरहेकाले धूलोे सामान्यझैं लाग्छ । गाउँघरमा परम्परागत चुल्होमा खाना पकाइने हुँदा धूँवा पनि कुनै समस्या हो जस्तो लाग्दैन । तर, सामान्यझैं लाग्ने धूलोे–धूँवाले नेपाली जनतालाई विस्तारै दम रोगतिर धकेलिरहेको डा. सुमिता चोलेखो बताउँछिन् । उनका अनुसार दमकै कारण कारण मुटु, मिर्गौला र फोक्सोको रोगसमेत निम्तन्छ । प्रस्तुत छ, भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा छिट्टै ख्वप अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न लागिएको जनस्वास्थ्य सेवाकेन्द्रमा ६ वर्षदेखि कार्यरत डा. चोलेखोसँग दम रोग, लक्षण, उपचारलगायत विषयमा रहेर आर्थिक अभियानका पूर्णभक्त दुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
दम रोग के हो ?
दम श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हो । यसले छातीका नसालाई कडा बनाउनुका साथै श्वास फेर्न गाह्रो पारिदिन्छ । फोक्सोको श्वासनलीमा आएको सङ्कुचनका कारण श्वासप्रश्वासमा हुने कठिनाइ, श्वास फुल्ने समस्या र श्वासप्रश्वासमा तीव्रता आउनु नै दम रोग लाग्नु हो । यो रोग लागिसकेपछि निको हुँदैन । यसलाई नियन्त्रणमा मात्र राख्न सकिन्छ । यो रोग दीर्घ रोग हो ।
यो रोग लाग्नुको पहिलो कारण धूमपान हो । लगातार रूपमा धूमपान गर्नेलाई यो रोगले छिट्टै समात्छ । दम लाग्नुको अर्को कारण वंशानुगत हुने गर्छ । यसैगरी वातावरणीय प्रतिकूलताको कारण अर्थात् धूलोे, धूँवा र चिसोका कारण पनि दम रोग लाग्छ । तनावले पनि दम बढाउँछ । साथै, भाइरल सङ्क्रमणले पनि सुषुप्त रूपमा रहेको दमलाई बढाइदिन्छ ।
यो रोगका लक्षण के के हुन् ?
दमका बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ । खोकी लाग्छ र खोकीसँगै खकार पनि आउँछ । दमको समस्या राति वा बिहानीपख वा धूवाँ–धूलोको सम्पर्कमा आएको बेला देखिन्छ । साथै, रुघाखोकी वा भाइरल इन्फेक्शन भएको अवस्थामा पनि दम जटिल बन्दै जान्छ । श्वास फेर्दा छातीबाट घ्यार–घ्यार आवाज आउने गर्छ रोग जटिल हुँदै गएपछि दिनहुँ जस्तो समस्या आइपर्छ ।
यसैगरी खोकी र श्वास फेर्दा सुसेल्न खोजे जस्तो आवाज आउन सक्छ । सुक्खा खोकीको समस्या दिउँसोमा भन्दा बिहान र साँझ बितेपछि बढ्दो देखिन्छ । दम एलर्जीको कारणबाट हुने भएकाले बिरामीलाई रुघा लागिरहने, शरीर चिलाउने र हाच्छ्युँ आइरहने पनि हुन सक्छ ।
चिकित्सकले दमको रोगी भनेर कसरी पहिल्याउँछन् त ?
दमको रोगसँग लक्षण मिलेपछि बच्चाहरूको पेट छामेर हेर्ने र वयस्कको छाती परीक्षण गरिन्छ । १ मिनेटमा छाती १८ पटकभन्दा बढी फुल्यो भने दमको आशङ्का गरिन्छ । २२ देखि २४ पटक फुल्यो भने दम भएको पुष्टि हुन्छ । साथै, दमका रोगीको खुट्टा सुन्निएको हुन्छ । शरीरमा अक्सिजन नपुगेर हात नीलो हुन्छ । यस्तो बेला बिरामीलाई छाती कस्सिए जस्तो वा केही कुराले थिचिराखे जस्तो हुनुका साथै लामो श्वास तान्न खोज्दा र श्वास फाल्न खोज्दा बढ्ता गाह्रो हुन्छ ।
दम भएको कसरी थाहा पाउने ?
यो रोगको मुख्य लक्षण नै स्वाँ–स्वाँ बढ्नु हो । खासगरी दमका बिरामीलाई श्वास लिनभन्दा बाहिर फ्ँयाक्दा स्वाँ स्वाँ आवाज आउँछ । रोगीले राम्ररी श्वास फेर्न सकेन भने उसको शरीर नीलो हुन थाल्छ । ओठबाट यसको राम्ररी पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, गर्दनको नसा फुल्न थाल्छ । धेरै धपेडी गर्दा, भर्‍याङ चढ्दा, दुई–चार कदम हिँड्दा, कुराकानी गर्दा, चुपचाप बस्दा वा लम्पसार परेर सुत्दा वा उठेर बस्दा पनि दम आउँछ कि आउँदैन होश गर्नुपर्दछ । चुपचाप बस्दा पनि दम आउनु दमको निकै खतरा अवस्था मान्नुपर्दछ ।
यो रोग बाल्यकालदेखि नै हुन सक्छ । जवान वा वृद्धले त आफूलाई श्वास फेर्न अठ्यारो भएको भन्न सक्छन् । तर, बच्चाले सक्दैनन् । यस कारण बच्चाको श्वास फेराइमा ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरूलाई दमले च्यापेको छ भने श्वास फेर्दा घ्यारघ्यार हुन्छ । तर, दमले धेरै च्यापेको छ भने श्वास फेरेको आवाज नै सुनिँदैन । बालकको पूरै शरीर नीलो हुन्छ, छटपटाउँछ तथा चिटचिट पसिना काढ्छ ।
१. दमले च्यापेको बेलामा बिरामीलाई खुला ठाउँमा कुर्सी वा खाटमा बसाएर राख्नुपर्छ । यसो गर्दा बिरामीलाई सजिलो पर्छ ।
२. रोगीलाई केही पनि हुँदैन भनेर ढाडस दिनुपर्छ । किनकि, चिन्ता र डरले स्वाँ–स्वाँ झन् बढ्छ ।
३. तातोपानी, सूप जस्ता तरल पदार्थ खुवाउनुपर्छ । सकेसम्म उम्लिरहेको पानीको बाफ लिन लगाउनुपर्छ । किनकि, बाफले श्वासनलीमा जमेको खकारलाई पातलो बनाइदिन्छ र बाहिर फाल्न सजिलो पार्छ ।
४. यसपछि बिरामीलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा जँचाउन लैजानुपर्छ ।
आजभोलि दमरोगका धेरै प्रकारका औषधि पाइन्छन् । ती औषधिले दमलाई नियन्त्रणमा सकिन्छ । तर, यी औषधि एकाएक खान बन्द गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा दम झन् बढ्छ । बिरामीको ज्यानै जान पनि सक्छ । यस कारण डाक्टरको सल्लाहबमोजिम नियमित रूपले औषधि खानुपर्छ । कसैकसैलाई एउटा खालको औषधिले काम गरेको हुन्छ भने कसैलाई दुई–चार किसिमका औषधि एकसाथ खानुपर्ने हुन्छ ।
दमका औषधि एक/दुई हप्ता खाएर बन्द गर्ने खालका हुँदैनन् । लामो समयसम्म खानुपर्ने खालका हुन्छन् । औषधि खान बिर्सने, डाक्टरको सल्लाहविना खाने वा खानै छाड्ने गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा रोगले झन् बढी च्याप्छ । झन् कहिलेकाहीँ त औषधि खाइरहेको बेला पनि समस्या बढ्न सक्छ । यस्तो बेला बिरामीलाई तुरुन्त स्वास्थ्यचौकी तथा डाक्टरकहाँ लगिहाल्नुपर्छ । झन् राम्रो कुरा त के हो भने, दमका रोगीले कुनै शिकायत नहुँदा पनि बेला बेला डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ ।
दमका रोगीलाई शुरूशुरूमा फोक्सोको नसा सहज बनाउन साल्बुटामोल दिए पुग्छ । यसैगरी ब्रोन्क्योडाइलटसले श्वास फेर्न सजिलो र खुम्चेको नसा फुलाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । डाक्टरहरूले दमको कडाखाले औषधि (कर्टिकोस्टे–वाइड) सकेसम्म दिँदैनन् । यो खान थालेपछि नियमित खानुपर्छ । अर्को, यो औषधिले काम नगरे पनि एकाएक छोड्नु हुँदैन । विस्तारै मात्रा कम गर्दै बन्द गर्नुपर्छ । कसरी बन्द गर्ने हो, त्यो तरीका सम्बन्धित डाक्टरबाट राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।
दम लागेकाले के के गर्नुपर्छ ?
१. चुरोट, तमाखु, बिँडी आदि सेवन गर्नेहरूलाई खोकी लागिरहने, खकार धेरै आउने र विस्तारै स्वाँ स्वाँ आउने दीर्घ खोकी (क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस) लाग्ने समस्या हुन्छ । धूमपान गर्नेहरूमा दमको रोग २० गुणा बढी, फोक्सो क्यान्सर ३० गुण बढी हुने तथा ग्याष्ट्रिक÷अल्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
२. दमको रोगीले चिसो, धूलोे, धूवाँ र खारबाट बच्नुपर्छ । यस्तो बचाउ कपडाले नाकमुख छोपेर गर्न सकिन्छ । घरको कोठा तथा भान्छाघरमा राम्ररी हावा ओहोर–दोहोर हुन सक्ने झ्यालको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
३. दमका रोगीहरूले तातोपानीको बाफ लिँदा निकै फाइदा हुन्छ । तातोपानी, चिया, सूप जस्ता तातो झोलले पनि दम तथा खोकी लागेका बिरामीलाई फाइदा गर्दछ । चिसोबाट बच्न घाम नलागेसम्म (कुइरो, हुस्सु लाग्दा) बाहिर नजाने, साँझ चाँडै घर फर्कने गर्नुपर्छ ।
४. लामो श्वास लिने, जतिसक्यो चाँडो श्वास बाहिर फेर्ने र श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी व्यायामले पनि दमका रोगीलाई फाइदा हुन्छ । बेलुन फुक्ने, शङ्ख बजाउने गर्दा श्वासनली बलिया हुन्छन् र यी नली खुम्चेर (ब्रोक्रोस्पाज्म) हुने स्वाँ स्वाँ कम हुन्छ ।
५. दमका रोगीले आफ्नो खकारको रङ कस्तो छ, ख्याल गर्नुपर्छ । खकारको रङ पहेँलो, खैरो, कालो भएमा कीटाणुको सङ्क्रमण भएको बुझेर डाक्टरले सुझाएको औषधि खानुपर्दछ । रुघा लागेपछि तुरुन्त उपचार गराउनुपर्दछ ।
६. हातगोडा, ओठ, जिब्रो नीलो छ कि छैन भनेर दमका रोगी तथा आफन्तहरूले होश गर्नुपर्दछ । जिब्रो नीलो भए रगतमा अक्सिजनको मात्रा निकै कम भएको थाहा हुन्छ । त्यसैले, जिब्रो नीलो भएपछि तुरुन्त अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ । धेरै स्वाँ स्वाँ आउँदा तथा जिब्रो नीलो हुँदा आवश्यकताअनुसार अक्सिजन सुँघाउन सकिन्छ । यो काम स्वास्थ्य कार्यकर्ताको सहयोग लिएर मात्र गर्नुपर्छ । आफै जान्ने भएर लिन वा दिन हुँदैन । धेरै मात्रामा प्राणवायु अक्सिजन लिएमा रगतमा धेरै भइराखेको कार्बन डाइअक्साइड एकाएक निकै कम भएर श्वास प्रश्वास प्रक्रिया नै बन्द हुन सक्छ । यसबाट बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्छ ।
७. दमका रोगीहरूले आफ्नो गोडा सुन्निएको छ कि छैन, ध्यान दिनुपर्दछ । गोडा फुल्नु, पिसाब कम हुनु, पेट पोल्नु, गर्दनको रगतको नली फुल्नु आदि लक्षण देखिनु मुटुले काम गर्न नसकेको (करपोलमोनाल इनफेलर) सङ्केत हो । यो अवस्था निकै खतरनाक भएकाले बिरामीलाई तुरुन्त अस्पताल लगेर विशेष उपचार गराउनुपर्दछ ।
८. दमका रोगीको रगतमा अक्सिजन कम भएपछि हेमोग्लोबिन (राता रक्तकोष) बढ्न थाल्छ । यो तत्त्व बढेपछि बिरामीको रगत निकै बाक्लो (सेकेण्डरी पोलिसाइथिमिया) हुने र रक्तसञ्चार ढिलो भएर अन्य समस्या पनि आउँछ ।
९. दमका रोगीलाई पेट पोल्ने र दुख्ने ग¥यो भने अमिलो–पीरो खान र भोकै बस्न पनि हुँदैन ।
१०. दमका रोगी कसै–कसैमा भने दिमागसम्बन्धी गडबडी पनि हुन सक्छ । यस्तो गडबढी रगतमा अक्सिजनको कमी भएर वा दमको औषधि (कर्टिकोस्टे–वाइड)को असरले रहेछ भने औषधि फेर्नुपर्छ ।
११. बालबच्चामा खोकी, लहरे खोकी, निमोनिया, क्षयरोग आदि लाग्दा, दादुरा आउँदा राम्रो उपचार नभएमा यसले पछि दमको रोग जन्माउन सक्छ । त्यसैले, यी रोगहरुको राम्रो उपचार गराउनुपर्दछ ।
दमले अन्य के के रोग ल्याउँछ ?
दमको रोकथाम गरिएन भने मुटुमा असर गर्छ । बिरामीको राइट हार्ट फेलर हुन्छ । फोक्सोले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, जसले गर्दा मुुटुलाई प्रेशर पर्छ । यही कारण मुटुको मासु सुन्निनुका साथै आकार बढ्न थाल्छ । यसपछि मुटुले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन र राइट हार्ट फेलर हुन्छ । विस्तारै मुटुका चारओटै भागमा असर परेर हृदयाघात हुने जोखीम बढ्छ । फोक्साले अक्सिजन प्रवाह गर्न नसक्दा किड्नीले पनि काम गर्न सक्दैन । राम्रोसँग श्वास फेर्न नसकेपछि कार्बनडाइअक्साइड फाल्न कठिन हुन्छ । यही कारण दिमागले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
दमको उपचार कसरी गरिन्छ ?
दमलाई निर्मूल पार्न नसके पनि समयमै पत्ता लागेमा नियन्त्रण भने गर्न सकिन्छ । दमका बिरामीलाई दमले आक्रमण नगरोस् भन्ने उद्देश्य पनि दमको उपचारमा हुन्छ । दमका बिरामीको उपचारमा ‘इन्हेलर’ विधि पनि अपनाइन्छ । यस विधिमा औषधिलाई यन्त्रको मद्दतले सीधै फोक्सोसम्म पुर्‍याइन्छ । मुखबाट खाइने औषधिको कम मात्रा मात्रै रक्तसञ्चारमा पुग्ने र शरीरका सबै भागमा पुग्ने भएकाले ‘साइड इफेक्ट’को सम्भावना बढी हुन्छ । दमका बिरामीले प्रयोग गर्ने ब्रोङ्क्रोडाइलेटर र स्टेरोइड औषधि यो विधिबाट दिने गरिन्छ ।
दमबाट जोगिन के गर्नुपर्छ त ?
एलर्जी बढाउने तत्त्वबाट टाढा रहने
धूलो र धूवाँबाट बच्ने
स्वस्थकर खानपानमा ध्यान दिने
भाइरल सङ्क्रमण आदि भएमा समयमै उपचार गर्ने
फ्रिजको चिसो खानेकुरा तथा पिउने कुरा नखाने वा कम सेवन गर्ने
रक्सी, चिल्लो–पिरो नखाने
thanks for usefool information
LeaveaReply to birendra gautam Cancel Reply